Zimbabwe Inovhotera Hurumende Itsva
HARARE — Zimbabwe yavhota neChitatu kuti isarudze hurumende itsva ichatora matomu kubva kuhurumende yemubatanidzwa iyo yange izere nemutauro.
Mutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, Va Robert Mugabe, vavhotera paMhofu Primary School mumusha we Highfield. Ukuwo mutungamiri weMDC huru, vari zvakare mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vavhotera pa Mt Pleasant High School zuva roda kunorova nhongonya.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekuvhota kwavaita, Va Mugabe vati vachapedza temu yavo yemakore mashanu kana veruzhinji vakavasarudza zvakare.
Va Tsvangirai vaudzawo vatori venhau kuti vachakunda musarudzo idzi zvisinei nekusafambiswa zvakanaka kwavati kwaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission.
Zvichakadai, munyori mukuru muMDC-T, Va Tendai Biti, vati vanhu vazhinji havana kukwanisa kuvhota musarudzo vachiti vanhu vazhinji ndivo vadzorwa nevanga vachivhotesa kudarika vanhu vavhota mune dzimwe nzvimbo munyika.
Va Biti vati ku Chipinge South mazita evari kukwikwidza musarudzo dzeparamende apesaniswa zvakonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka.
Zvisinei nekuchemachema kuri kuita MDC-T nemafambisirwo aitwa sarudzo, VaMugabe vati yave garoziva kuti MDC inoyema pasina chikonzero.
VaMugabe naVaTsvangirai vari kusangana musarudzo yemutungamiri wenyika kechitatu. Vaviri ava vakasangana musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2002, iyo inonzi nevakawanda yakabiridzirwa, izvo zvakaita kuti VaTsvangirai vakundwe.
Vakasangana zvakare muna 2008, VaTsvangirai vakakunda VaMugabe, asi vakatadziswa kuenda kuState House nepamusana pemutemo unotara huwandu hwemavhoti anoita kuti munhu agadzwe semutungamiri wenyika.
Izvi zvakaita kuti paitwe sarudzo yepiri yemutungamiri wenyika, iyo VaMugabe vakazosara vari vega mushure mekunge VaTsvangirai vabuda musarudzo iyi vachiti vatsigiri vavo vakange vachipondwa nevatsigiri vaVaMugabe.
Vamwe vevanhu vakafa munguva ivi vanosanganisira nhengo yevechidiki mu MDC-T, muchakabvu Tonderai Ndira nemudzimai wevaive mutevedzeri wameya weHarare, VaEmmanuel Chiroto, muchakabvu Abigail Chiroto nevamwe.